ဂရမ်မြေအကြောင်းနှင့် မည်သည့်မြေများကို ဂရန်ချထားနိုင်သလဲ - Latest Myanmar News
May 23, 2020 by Latest Myanmar News
ဂရန်ဆိုတာ ဘာလဲ မသိတဲ့အပြင် ကြေးတိုင်နဲ့ မြေစာရင်းက ဂရန်ပေးတယ်လို့ ထင်နေသူတွေ အများကြီး တွေ့နေရပါတယ်။
မြေစာရင်းက ဂရန်ပေးခွင့် မရှိပါ။တည်ဆဥပဒေများတွင် အာဏာ အပ်မထားပါ။
အကြောင်းတစ်ရပ်အတွက် သက်သေခံအဖြစ် ကူးပေးရတဲ့ သက်သေခံ မြေပုံ ၁၀၅ ကိုတောင် ဂရန်မှတ်နေတဲ့ သူက ရှိသေး… ဂရန် အ ကြောင်း သိချင် ရင် ဖတ်ပါ…….
အပိုင်း – ၁ ဂရန်
၁။ မြို့မြေများမှာလူနေထိုင်ရန် (Residential Purposes) အတွက်ဖြစ်စေ၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေး၊ စည်ပင် သာယာရေး စတဲ့ ကိစ္စရပ်များအတွက် ဖြစ်စေ၊ မြို့မြေကို တနည်းနည်း အသုံး ပြုလိုရင် အစိုးရထံက မြေငှားစာချုပ်နဲ့ မြေငှါးရမ်းသုံးစွဲခွင့် လျှောက်ထားရပါတယ်။
မြေငှားစာချုပ်ကို ဂရန် (Lease) လို့ ခေါ်ပါတယ်။အပိုင် သ ဘောမျိုး ချထားတာကတော့ Grant လို့ ခေါ်ပါတယ်။အခုတော့ Grant ရော၊ Lease ရောကို ဂရန်လို့ဘဲ ခေါ်ကြပါတယ်။
အစိုးရမြေကို (ငှါးရမ်း)အသုံးပြုလိုတဲ့ ပုဂ္ဂလိကများ၊ ဌာနဆိုင် ရာ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊အသင်းများအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ကော်လိပ်တော်အရာရှိထံ လိပ်မူပြီး ဂရန်လျှောက်ထားကြရပါတယ်။
(ရန်ကုန် မန္တလေးမှာတော့ မြို့တော်စည်ပင်)။ အဲဒီအခါမှာ သက်ဆိုင် ရာ ခရိုင်/မြို့နယ်များရှိ အ ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနများက လျှောက်လွှာကို လက်ခံပြီး အမှုတွဲ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုနောက် အမှုတွဲကို ကြေးတိုင်နှင့်မြေစာရင်းဦးစီးဌာနရဲ့ မြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာန ရုံးများထံသို့ အစိုးရမှ ချထားပေးနိုင်သော မြေ ဟုတ်-မဟုတ် နှင့် မြေရာဇဝင်ကို စီစစ် မှတ်ချက်ပြု ပြန်ကြားပေးရန် လွှဲပြောင်း ပေးပို့လေ့ရှိပါတယ်။
အဲဒီလို ပေးပို့တဲ့ မြို့/မြေ ဂရန်အမှုတွဲတွေကို မြို့နယ် မြေစာရင်းဦးစီးဌာနက မိမိဌာနမှာ ရှိတဲ့ မြို့ကွက်မြေပုံ(Block Maps)၊ မြေရာဇဝင်မှတ်တမ်း (1-A Register) တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စိစစ်ပြီး လျှောက်ထားတဲ့ မြေနေရာအတွက် မြေရာဇဝင် မှတ်တမ်း ဖေါ်ပြပေးခြင်း၊ ယင်းမြေနေရာသည် အစိုးရ မြေလွတ်မြေလပ် ဟုတ်/မဟုတ် နှင့် အစိုးရမှ ချထားပေးနိုင်သောမြေ Disposal Land ဟုတ်/မဟုတ် မှတ် ချက်ပြုခြင်း၊ မြို့မြေဧရိယာအတွင်း ကျရောက်ခြင်း ရှိ မရှိ နဲ့ အစိုးရ အဆောက်အဦးနှင့်အခြားကိစ္စများ အသုံးပြု ရန် လျာထားမြေများအတွင်း ကျရောက်ခြင်း ရှိ/မရှိ တို့ကို စီစစ်ပေးခြင်း၊ မြေတန်ဘိုးနဲ့ မြေငှားခများ တွက်ချက်ပေး ခြင်း၊ စတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို ဆောင်ရွက်ပေးရပါတယ်။
ဂရန်ထုတ်ပေးတာက ထွေ/အုပ် ဖြစ်ပြီး မြေကို စိစစ်ပေးတာ က မြေစာရင်းဌာန ဖြစ်ပါတယ်။
ဂရန်ချထားပေးမှုအတွက် ထွေ/အုပ်(G.A)ကသာ အဓိကတာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ပိုင် ခွင့်ရှိပြီး မြေစာရင်းဌာနက မြေပုံ(မြေစာရင်း-၁၀၅)၊ မြေရာဇ၀င် (မြေစာရင်း-၁၀၆)နဲ့ မြေပေါ်လက်ရှိဖြစ်မှု အခြေ အနေကိုသာ စိစစ်ပြန်ကြားရန် တာဝန်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မြေဆိုရင် မြေစာရင်းက လုပ်တာဘဲဆိုတဲ့ အစွဲရှိလေတော့ ဂရန်ကိစ္စဆိုရင် မြေစာရင်းဌာနကိုချည်း ဦးတည်ပြီး မြေစာရင်းက မတရား ဂရန်ထုတ်ပေးထားပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ တိုင် တိုင်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဂရန်ချထားခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် အောက်မြန်မာပြည်မြေနှင့် အခွန်တော် လက်စွဲဥပဒေ၊အထက်မြန်မာပြည် မြေနှင့်အခွန်တော် စည်းမျဉ်းဥပဒေ၊ အောက်မြန်မာပြည်မြို့ နှင့်ကျေးရွာမြေများဥပဒေတို့က ပြဌာန်းထားရှိတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနဲ့ ဌာန ၂ ခုရဲ့ သမားစဉ် လုပ်ငန်းတွေကို သတ်မှတ်ထားပြီးသား ဖြစ်တာကို တိုင်တန်းတဲ့သူတွေ သေသေချာချာ သဘော မပေါက်ကြပါဘူး။
ဒါကြောင့် ဂရန် ဆို မြေစာရင်းက ထုတ်ပေးနေတယ် ထင်ကြလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂရန်ကိစ္စမှာ မြေစာရင်းတာဝန်က မြေပုံရေးကူးပေးခြင်းနဲ့ မြေရာဇ၀င် ပြန်ကြားခြင်းသာဖြစ်ပြီး အဓိကa တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရတာ GAD က ကော်လိပ်တော်တွေ ဆောင်ရွက်ရတယ်ဆိုတာ မသိတဲ့ လူ အများကြီးပါ။
အမှန်ကတော့ ဂရန်အမှုတွဲကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက်တာ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ကော်လိပ်တော်အရာရှိရုံးက ဖြစ်ပေမဲ့ ဂရန်လျှောက်မဲ့မြေကို မြေပုံရေးဆွဲပေးရတာ၊ မြေရာဇ၀င် ထုတ်ပြန်ပေးရတာအပြင် ဂရန်ပေး နိုင်တဲ့ မြေ ဟုတ်-မဟုတ်ကို ဌာနရှိ မြေပုံ၊ မြေရာဇ၀င်၊ မှတ်တမ်း၊ အထောက်အထားများ နဲ့ တိုက်ဆိုင်စိစစ်မှတ်ချက်ပြုရတာကမြေစာရင်းဌာနဖြစ်လေတော့ ဂရန်ထုတ်ပေးနိုင်ဘို့ မြေစာရင်းက တာဝန်ယူထားရတဲ့ ကဏ္ဍ ကလည်း မသေးပါဘူး။
ဂရန်ပေးသင့်တဲ့မြေ မဟုတ်ရင် မဟုတ်ကြောင်း မြေစာရင်းဌာနအနေနဲ့ ထောက်ပြရမဲ့ တာဝန် ရှိ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ပေါင်းစားရင် အရိုးတောင်နူးတယ် ဆိုတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ သမားစဉ်တွေလည်း ပျက်သွား တယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးဆိုတဲ့ တသွေး တသံ တမိန့်နဲ့ အာဏာရှင်ဆန်ဆန် တာဝန်ပေးအပ်မှု ကို စိတ်ပါသည်ဖြစ်စေ မပါသည်ဖြစ်စေ အောင့်အည်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရတဲ့ ကာလတွေကလည်း တမေ့တမော ဆိုတော့ အာဏာပိုင်တွေအကြိုက် လိုက်လုပ်ပေးရာက စာအုပ်ကြီးတွေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတွေကို အလေးမထား အဖတ်အရှု အလေ့အလာ မရှိတော့ဘဲ ကြုံသလို ဖြစ်သလို လုပ်ပေးတတ်သွားတဲ့ အကျင့်ဆိုး စွဲသွားကြတာ ဌာန တိုင်းလိုလို ဖြစ်တော့ကာ ထွေအုပ်နဲ့ မြေစာရင်းလည်း မိုးခါးရေသောက်တဲ့အထဲ ရောယောင်ပါသွားတာ မဆန်းပါ။
အခုခေတ် ဂရန်တချို့ဥပဒေနဲ့ ညီရဲ့လား
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အလေးမထားခဲ့တဲ့ ကာလတွေရဲ့ အကျိုးဆက်အဖြစ် ယခုအခါမှာတော့ ဂရန်အမှုတွဲ တွေ မြေစာရင်းဌာနကို ပေးပို့လာတဲ့အခါ မြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာနရုံးတွေဟာ မြို့နဲ့ ကျေးရွာမြေများ လက်စွဲဥပ ဒေမှာ ပြဌာန်းထားတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း မိမိတို့ဆောင်ရွက်ပေးရမဲ့ ကိစ္စတွေကို ဥပဒေပြဌာန်းချက်နဲ့အညီ နည်းလမ်းတကျ၊ စနစ်ကျနစွာ ဆောင်ရွက်ပေးမှု မရှိတော့တာတွေ၊ ပြည့်စုံစွာ စီစစ် မှတ်ချက် မပြုတော့တာတွေကို တွေ့ရှိ လာရပါတယ်။
မြေစာရင်းဌာနအနေနဲ့ ပဲခူးဆားလို နေရာတကာ ပါနေရတော့ တခြားအလုပ်တွေ ပိလွန်းတဲ့ အခါ မြို့မြေကိစ္စတွေကို လှည့်မကြည့်နိုင်တာလဲ ပါပါတယ်။
စနစ်တကျ မစိစစ်တော့ဘဲ အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက် လိုက်တဲ့အခါ အားနည်းချက်တွေ ရှိသွားပြီး အစိုးရ မြေလွတ်မြေလပ် မဟုတ်တဲ့ အခြားမြေများ (ဥပမာ- သစ်တော ကြိုးဝိုင်းမြေ၊မီးရထားမြေ၊ လမ်းမြေ၊ ဆည်မြောင်းမြေ၊ စည်ပင်သာယာပိုင်မြေ၊ အစိုးရ ဌာန/ပုဂ္ဂလိကသို့ ချထား ပြီးမြေ) စတာတွေကို အစိုးရက ချထားပေးနိုင်သည့် မြေ Land at the disposal by Government လို့ မှားယွင်း မှတ်ချက်ပြုခြင်း၊ ယင်းမြေများကို ဂရန်ချထားပေးရန်ထောက်ခံခြင်း၊ စတဲ့ လွဲမှားတဲ့ မှတ်ချက်ပြု ပြန်ကြားမှုတွေ ဖြစ်လာရပြီး အခြား မသက်ဆိုင်သူတွေအတွက်၊ ချထား မပေးသင့်တဲ့ အစိုးရဌာနပိုင်မြေများ၊ အစိုးရ သီးသန့်ထား တဲ့ မြေများပေါ်မှာ ပုဂ္ဂလိကများကို ဂရန်ထုတ်ပေးရန်အထိ ထောက်ခံပေးခဲ့ခြင်းများ ရှိသွားကြပါတယ်။
မြေစာရင်း ဌာနရဲ့ မြေရာဇဝင်ကို လွဲမှားစွာ မှတ်ချက်ပြု ထောက်ခံပေးချက်အပေါ် မူတည်ပြီး မချထားသင့်တဲ့ မြေများ/ဂရန်ချ ထား မပေးနိုင်တဲ့မြေများကို မြေငှါးဂရန် ထုတ်ပေးမိခဲ့လို့ ပြဿနာ ဖြစ်ပွါးရတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေ၊ အရှုပ်အရှင်း ဖြစ်ရတာ တွေ အများကြီး ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
မနေ့ တနေ့ကထိ မြေစာရင်းနဲ့ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှာ ဂရန်မြေ အရှုပ်အရှင်းအတွက် အရေးယူခဲ့ရ သူတွေ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မြေစာရင်းဝန်ထမ်းတွေကို မြေရာဇဝင် မှတ်တမ်း မှားယွင်းထုတ်ပေးမှု အတွက်နဲ့ မြေပုံအမှား ထုတ်ပေးမှုအတွက် အရေးယူခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေလည်း နားမဆန့်အောင် ကြားဘူးကြမှာပါ။
G.A နဲ့ အခြားဌာနက ဆရာတွေလည်း ထိတာပါဘဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းက ဂရန်မှား ပေးမိတဲ့ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့၊ မော်လမြိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မြေ အငှါးချတဲ့ကိစ္စအတွက် သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းအဆင့် တာဝန် ရှိသူတို့ စသည်ဖြင့် မြေကိုင်သွားတာတွေ အများကြီးပါ။
မြေဆိုတာ ဒီဖက်ခေတ်မှာ တန်ဘိုးမြင့် ပစ္စည်းတစ်ရပ် ဖြစ်လာနေတော့ အကိုင်အတွယ်မှားခဲ့ရင် တစ်ချိန်မှာ အရိုးတွန်တတ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့်မို့ဌာနက လူငယ် သွေး သစ်တွေအတွက်ရော ပြင်ပက ဗဟုသုတအဖြစ် သိမှတ်ချင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ပါ ဂရန်ချထားမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ၊ သမားစဉ် လုပ်ထုံး လုပ်နည်းလေးတွေကို တင်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဂရန်အကြောင်း ပြောကြတဲ့အခါ မြို့မြေဆိုတာ ဘာလဲ၊
အစိုးရမှ စီမံချထားနိုင်သော မြေဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို အစပြု ပြောရပါတယ်။
မြို့မြေ အ၀န်းအ၀ိုင်းအတွင်း ကျရောက်ပြီး အစိုးရမှ ချထားနိုင်သောမြေ ဖြစ်မှ သာလျှင် ဂရန်ပေးလို့ ရပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ မြို့မြေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တည်ဆဲဥပဒေ ညွှန်ကြားချက်၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း လမ်းညွှန်ချက်အချို့နဲ့ ဝေါဟာရ ရှင်းလင်းချက်တွေကို အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ် ဖေါ်ပြလိုပါတယ်။
(က) အစိုးရစီမံချထားပိုင်ခွင့်် ရှိသောမြေ ( LAND AT THE DISPOSAL OF GOVERNMENT)၊
အစိုးရမှစီမံချထားပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေ (Land atthe disposal of Government) ဆိုတာကတော့ မြို့မြေမှာ အသုံးများတဲ့ ဝေါဟာရတစ်ခုပါ။
Disposal Land လို့ ဖေါ်ကြပါတယ်။
အောက်မြန်မာပြည် မြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ (၂)၊ ပုဒ်မ (၃)၊ ပုဒ်မ (၄)တို့မှာ ဖေါ်ပြထားချက်အရ မြို့မြေ ရွာမြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဧရိယာအတွင်း ကျရောက်ပြီး မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ အစိုးရ အနေဖြင့် အပိုင်ဖြစ်စေ၊ အငှားဖြစ်စေ ပေးအပ်ချထားခြင်း၊ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် (သို့) မြေရှင် ဆိုင်ရာဆိုင်ခွင့် အတွက် မည်သူ့ကိုမျှ ပေးအပ်ထားခြင်း မရှိသေးတဲ့ မြေများ၊ လက်ရှိ ဦးပိုင်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း မရှိတဲ့ မြေများ၊ မည်သူမျှ လက်ဝယ်ထားရှိပိုင်ခွင့် မရရှိသေးတဲ့ မြေများကို ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ အစိုးရမှ ချထားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ မြေထဲမှာ လူနေထိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လည်းကောင်း၊ အသုံးပြုခွင့် ရရှိထားတဲ့၊ သုံးနေတဲ့ မြေတွေ မပါရပါဘူး။
ထို့အတူ ရုံး၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံ၊ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့၊ မီးရထား၊ သစ်တော၊ ဆည်မြောင်း၊ လမ်း တံတားစတဲ့ အစိုးရဌာနများမှ အသုံး ပြုရန် သတ်မှတ်ထားပြီးတဲ့ မြေများလည်း မပါဝင်ပါဘူး။
ထို့အတူ သာသနာ၊ သုဿန်၊ အင်းအိုင် စတဲ့ သီးခြား သတ်မှတ် ချထားပေးပြီး မြေများလည်း မပါဝင်ပါဘူး။ ယခင်က Disposal Land ဖြစ်ခဲ့လို့ မြေငှား ဂရန် ထုတ်ပေးထားတဲ့ မြေသည်ပင် နိုင်ငံတော်ပိုင် မြေဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါ ထုတ်ပေးထားတဲ့ မြေငှား ဂရန် သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်း မရှိသေးသမျှ အစိုးရမှ ချထားပေးနိုင်မြေအဖြစ် ချထားပေးလို့ မရနိုင်သေးပါဘူး။
ဂရန်သက်တမ်းအရ သုံးစွဲခွင့်် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့မြေကို (Land at the disposal of Government) အစိုးရမှ ချထားနိုင်သောမြေလို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး။
တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ချပေးပြီးဖြစ်နေတဲ့ သက် တမ်းအတွင်း သက်တမ်းမကုန်မချင်း ယင်းမြေကွက်ကို အခြားတစ်ယောက်သို့ ပြောင်းလဲချထား၍မရပါဘူး။
ချထားလိုရင်တော့ မူလအမှုတွဲကို ပြန်လည် ဖျက်သိမ်းပေးရပါမယ်။
သက်တန်းမကုန်သေးတဲ့မြေကို ချထားမိရင် Law of Contract ပဋိဥာဉ်ဥပဒေကို ဖေါက်ဖျက်ရာ ကျပါတယ်။
မြေတစ်ကွက်ကို ဂရန် ချထားပေးနိုင်ရန်မှာ အစိုးရမှ ချထားပေးပိုင်ခွင့် ရှိသောမြေ ဖြစ်မှသာလျှင် ချထားပေးနှိုင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အစိုးရမှ ချထားပေးပိုင်ခွင့် ရှိသောမြေ ဟုတ်/မဟုတ်အတွက် မြေယာ မှတ်တမ်းထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်တဲ့ မြေစာရင်းဌာနရဲ့ မှတ်ချက်ဟာ အလွန် အရေးပါတယ်ဆိုတာ သတိပြု ရပါမယ်။
အစိုးရမှ ချထားပေးပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေ မဟုတ်ရင် မဟုတ်ကြောင်းကို မြေစာရင်းရဲ့ ပြန်ကြားချက် မှာ တိတိကျကျ ဖေါ်ပြရန် လိုပါတယ်။
( ခ ) မြို့မြေနေထိုင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်( Right of Land)မြို့များအတွင်းမှာ ရှိတဲ့မြေတွေကို အစိုးရက ချထားသတ်မှတ်ပေးတဲ့ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ၁၈၉၈ခုနှစ် အောက်မြန်မာပြည် မြို့နှင့် ကျေးရွာ မြေများ အက်ဥပဒေ အခန်း-၂၊ ပုဒ်မ-၇ နှင့် ၈ တို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီအချက်များနှင့် ညီညွတ်မှသာ မြေပေါ် နေထိုင် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ပုဒ်မ ၇ ။ အောက်ပါ မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့် အခွင့်အရေးများမှအပ အခြားမည်သည့် ဆိုင်ရာဆိုင်ခွင့်ကိုမျှ မြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများတွင် မရှိစေရ။
(ဃ) အထက် ပုဒ်မ ၇၊ ပုဒ်မခွဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ တို့ပါ အခွင့်အရေးကို မူလပိုင်ဆိုင်သူထံမှ တရားဥပဒေနှင့်အညီ လွှဲပြောင်းရယူခံစားခွင့်၊
ပုဒ်မ ၈ ။ စာရင်းဝင်မြို့များ (Scheduled Town)နှင့် အစိုးရမှ အမိန့်ထုတ်ပြန် ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးထား သော မြေများမှအပ အောက်ပါအချက်များနှင့် ညီညွတ်သူ မည်သူမဆို (Landholder’s right) မြေရှင် ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးကို ရရှိစေရမည်။
(က) မြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများ ပြဌာန်းအတည်မဖြစ်မီ လွန်ခဲ့သော ၁၂ နှစ်မှ ၁၈၉၉ ခုနှစ်၊ စက်တင် ဘာလ၉ ရက်နေ့ထိ မြေကို တဆက်တည်း ပိုင်ဆိုင် လက်ရှိထားလာသူ၊
(ခ) သို့မဟုတ် ၁၈၉၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ-၉ ရက်နေ့ မတိုင်မီ အချို့သောကာလနှင့် ယင်းနေ့ နောက်ပိုင်း လက်ရှိဖြစ်နေသောကာလ ၂ ရပ်ပေါင်း ၁၂ နှစ်ကာလပြည့်အောင် မြေကို လက်ရှိ ထားပိုင်ဆိုင်လာသောသူ၊
(ဂ) သိုိ့မဟုတ် ၁၈၉၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ-၉ ရက်နေ့မှစ၍ နောက်ပိုင်း ၁၂ နှစ်ကာလတိုင် တဆက်တည်း မြေကို ပိုင်ဆိုင်လက်ရှိထားလာပြီး ယင်းကာလများ၌ ၄င်းမြေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အရပ်ရပ်မြေခွန်တော်များ၊ အစိုးရသို့ ပေးသွင်းရမည့် အခွန်အခများ public demands ကို ထမ်း ဆောင်လာသူ၊ မည်သူမဆို မြေပိုင်အခွင့်အရေး ရရှိစေရမည်။
ပုဒ်မ ၉ ။ စစ်တွေ၊ ပုသိမ်နှင့် ပြည်မြို့များအတွက်
(ခ) ပုသိမ်မြို့တွင်၁၈၇၆ ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်မှ စ၍ ယခုအက်ဥပဒေ အတည်ဖြစ်သည့် ၁၈၉၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ-၉ ရက်နေ့ထိ အဆက်မပြတ် လက်ရှိ ဖြစ်နေပါက၊
(ဂ) ပြည်မြို့တွင် ၁၈၇၀ ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်မှ အစပြု၍ ယခုအက်ဥပဒေ အတည်ဖြစ်သည့် ၁၈၉၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ-၉ ရက်နေ့ထိ် အဆက်မပြတ် လက်ရှိ ဖြစ်နေပါက၊
မည်သူမဆို မြေပိုင်အခွင့်အရေး ရရှိစေရမည်။ဆိုပြီး မြို့မြေပေါ်မှာ ပိုင်ဆိုင်ရမဲ့ အခွင့်အရေးတွေ သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာတွေ့ရပါသည်။
ဂရနျဆိုတာ ဘာလဲ မသိတဲ့အပွငျ ကွေးတိုငျနဲ့ မွစောရငျးက ဂရနျပေးတယျလို့ ထငျနသေူတှေ အမြားကွီး တှနေ့ရေပါတယျ။
မွစောရငျးက ဂရနျပေးခှငျ့ မရှိပါ။တညျဆဥပဒမြေားတှငျ အာဏာ အပျမထားပါ။
အကွောငျးတဈရပျအတှကျ သကျသခေံအဖွဈ ကူးပေးရတဲ့ သကျသခေံ မွပေုံ ၁၀၅ ကိုတောငျ ဂရနျမှတျနတေဲ့ သူက ရှိသေး… ဂရနျ အ ကွောငျး သိခငျြ ရငျ ဖတျပါ…….
အပိုငျး – ၁ ဂရနျ
၁။ မွို့မွမြေားမှာလူနထေိုငျရနျ (Residential Purposes) အတှကျဖွဈစေ၊ စီးပှါးရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေး၊ မွို့ပွဖှံ့ဖွိုးရေး၊ စညျပငျ သာယာရေး စတဲ့ ကိစ်စရပျမြားအတှကျ ဖွဈစေ၊ မွို့မွကေို တနညျးနညျး အသုံး ပွုလိုရငျ အစိုးရထံက မွငှေားစာခြုပျနဲ့ မွငှေါးရမျးသုံးစှဲခှငျ့ လြှောကျထားရပါတယျ။
မွငှေားစာခြုပျကို ဂရနျ (Lease) လို့ ချေါပါတယျ။အပိုငျ သ ဘောမြိုး ခထြားတာကတော့ Grant လို့ ချေါပါတယျ။အခုတော့ Grant ရော၊ Lease ရောကို ဂရနျလို့ဘဲ ချေါကွပါတယျ။
အစိုးရမွကေို (ငှါးရမျး)အသုံးပွုလိုတဲ့ ပုဂ်ဂလိကမြား၊ ဌာနဆိုငျ ရာ၊ အဖှဲ့အစညျးမြား၊အသငျးမြားအနနေဲ့သကျဆိုငျရာ ခရိုငျအထှထှေအေုပျခြုပျရေး ဦးစီးဌာန၊ ကျောလိပျတျောအရာရှိထံ လိပျမူပွီး ဂရနျလြှောကျထားကွရပါတယျ။
(ရနျကုနျ မန်တလေးမှာတော့ မွို့တျောစညျပငျ)။ အဲဒီအခါမှာ သကျဆိုငျ ရာ ခရိုငျ/မွို့နယျမြားရှိ အ ထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာနမြားက လြှောကျလှာကို လကျခံပွီး အမှုတှဲ ဖှငျ့လှဈဆောငျရှကျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ထိုနောကျ အမှုတှဲကို ကွေးတိုငျနှငျ့မွစောရငျးဦးစီးဌာနရဲ့ မွို့နယျမွစောရငျးဦးစီးဌာန ရုံးမြားထံသို့ အစိုးရမှ ခထြားပေးနိုငျသော မွေ ဟုတျ-မဟုတျ နှငျ့ မွရောဇဝငျကို စီစဈ မှတျခကျြပွု ပွနျကွားပေးရနျ လှဲပွောငျး ပေးပို့လရှေိ့ပါတယျ။
အဲဒီလို ပေးပို့တဲ့ မွို့/မွေ ဂရနျအမှုတှဲတှကေို မွို့နယျ မွစောရငျးဦးစီးဌာနက မိမိဌာနမှာ ရှိတဲ့ မွို့ကှကျမွပေုံ(Block Maps)၊ မွရောဇဝငျမှတျတမျး (1-A Register) တှနေဲ့ တိုကျဆိုငျစိစဈပွီး လြှောကျထားတဲ့ မွနေရောအတှကျ မွရောဇဝငျ မှတျတမျး ဖျေါပွပေးခွငျး၊ ယငျးမွနေရောသညျ အစိုးရ မွလှေတျမွလေပျ ဟုတျ/မဟုတျ နှငျ့ အစိုးရမှ ခထြားပေးနိုငျသောမွေ Disposal Land ဟုတျ/မဟုတျ မှတျ ခကျြပွုခွငျး၊ မွို့မွဧေရိယာအတှငျး ကရြောကျခွငျး ရှိ မရှိ နဲ့ အစိုးရ အဆောကျအဦးနှငျ့အခွားကိစ်စမြား အသုံးပွု ရနျ လြာထားမွမြေားအတှငျး ကရြောကျခွငျး ရှိ/မရှိ တို့ကို စီစဈပေးခွငျး၊ မွတေနျဘိုးနဲ့ မွငှေားခမြား တှကျခကျြပေး ခွငျး၊ စတဲ့ကိစ်စရပျတှကေို ဆောငျရှကျပေးရပါတယျ။
ဂရနျထုတျပေးတာက ထှေ/အုပျ ဖွဈပွီး မွကေို စိစဈပေးတာ က မွစောရငျးဌာန ဖွဈပါတယျ။
ဂရနျခထြားပေးမှုအတှကျ ထှေ/အုပျ(G.A)ကသာ အဓိကတာဝနျခံ ဆောငျရှကျပိုငျ ခှငျ့ရှိပွီး မွစောရငျးဌာနက မွပေုံ(မွစောရငျး-၁၀၅)၊ မွရောဇဝငျ (မွစောရငျး-၁၀၆)နဲ့ မွပေျေါလကျရှိဖွဈမှု အခွေ အနကေိုသာ စိစဈပွနျကွားရနျ တာဝနျခံရတာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ မွဆေိုရငျ မွစောရငျးက လုပျတာဘဲဆိုတဲ့ အစှဲရှိလတေော့ ဂရနျကိစ်စဆိုရငျ မွစောရငျးဌာနကိုခညျြး ဦးတညျပွီး မွစောရငျးက မတရား ဂရနျထုတျပေးထားပါတယျ ဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြနဲ့ တိုငျ တိုငျနတော တှရေ့ပါတယျ။
ဂရနျခထြားခွငျး လုပျငနျးအတှကျ အောကျမွနျမာပွညျမွနှေငျ့ အခှနျတျော လကျစှဲဥပဒေ၊အထကျမွနျမာပွညျ မွနှေငျ့အခှနျတျော စညျးမဉျြးဥပဒေ၊ အောကျမွနျမာပွညျမွို့ နှငျ့ကြေးရှာမွမြေားဥပဒတေို့က ပွဌာနျးထားရှိတဲ့ လုပျထုံးလုပျနညျးတှနေဲ့ ဌာန ၂ ခုရဲ့ သမားစဉျ လုပျငနျးတှကေို သတျမှတျထားပွီးသား ဖွဈတာကို တိုငျတနျးတဲ့သူတှေ သသေခြောခြာ သဘော မပေါကျကွပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ ဂရနျ ဆို မွစောရငျးက ထုတျပေးနတေယျ ထငျကွလို့ ဖွဈပါတယျ။
ဂရနျကိစ်စမှာ မွစောရငျးတာဝနျက မွပေုံရေးကူးပေးခွငျးနဲ့ မွရောဇဝငျ ပွနျကွားခွငျးသာဖွဈပွီး အဓိကa တာဝနျယူဆောငျရှကျရတာ GAD က ကျောလိပျတျောတှေ ဆောငျရှကျရတယျဆိုတာ မသိတဲ့ လူ အမြားကွီးပါ။
အမှနျကတော့ ဂရနျအမှုတှဲကို တာဝနျခံဆောငျရှကျတာ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာန ကျောလိပျတျောအရာရှိရုံးက ဖွဈပမေဲ့ ဂရနျလြှောကျမဲ့မွကေို မွပေုံရေးဆှဲပေးရတာ၊ မွရောဇဝငျ ထုတျပွနျပေးရတာအပွငျ ဂရနျပေး နိုငျတဲ့ မွေ ဟုတျ-မဟုတျကို ဌာနရှိ မွပေုံ၊ မွရောဇဝငျ၊ မှတျတမျး၊ အထောကျအထားမြား နဲ့ တိုကျဆိုငျစိစဈမှတျခကျြပွုရတာကမွစောရငျးဌာနဖွဈလတေော့ ဂရနျထုတျပေးနိုငျဘို့ မွစောရငျးက တာဝနျယူထားရတဲ့ ကဏ်ဍ ကလညျး မသေးပါဘူး။
ဂရနျပေးသငျ့တဲ့မွေ မဟုတျရငျ မဟုတျကွောငျး မွစောရငျးဌာနအနနေဲ့ ထောကျပွရမဲ့ တာဝနျ ရျှိပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ပေါငျးစားရငျ အရိုးတောငျနူးတယျ ဆိုတဲ့ ခတျေကွီးမှာ သမားစဉျတှလေညျး ပကျြသှား တယျထငျပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ စဈအုပျခြုပျရေးဆိုတဲ့ တသှေး တသံ တမိနျ့နဲ့ အာဏာရှငျဆနျဆနျ တာဝနျပေးအပျမှု ကို စိတျပါသညျဖွဈစေ မပါသညျဖွဈစေ အောငျ့အညျး ဆောငျရှကျပေးခဲ့ရတဲ့ ကာလတှကေလညျး တမတေ့မော ဆိုတော့ အာဏာပိုငျတှအေကွိုကျ လိုကျလုပျပေးရာက စာအုပျကွီးတှေ၊ လုပျထုံး လုပျနညျးတှကေို အလေးမထား အဖတျအရှု အလအေ့လာ မရှိတော့ဘဲ ကွုံသလို ဖွဈသလို လုပျပေးတတျသှားတဲ့ အကငျြ့ဆိုး စှဲသှားကွတာ ဌာန တိုငျးလိုလို ဖွဈတော့ကာ ထှအေုပျနဲ့ မွစောရငျးလညျး မိုးခါးရသေောကျတဲ့အထဲ ရောယောငျပါသှားတာ မဆနျးပါ။
အခုခတျေ ဂရနျတခြို့ဥပဒနေဲ့ ညီရဲ့လား
လုပျထုံးလုပျနညျးကို အလေးမထားခဲ့တဲ့ ကာလတှရေဲ့ အကြိုးဆကျအဖွဈ ယခုအခါမှာတော့ ဂရနျအမှုတှဲ တှေ မွစောရငျးဌာနကို ပေးပို့လာတဲ့အခါ မွို့နယျမွစောရငျးဦးစီးဌာနရုံးတှဟော မွို့နဲ့ ကြေးရှာမွမြေား လကျစှဲဥပ ဒမှော ပွဌာနျးထားတဲ့ လုပျငနျးစဉျမြားအတိုငျး မိမိတို့ဆောငျရှကျပေးရမဲ့ ကိစ်စတှကေို ဥပဒပွေဌာနျးခကျြနဲ့အညီ နညျးလမျးတကြ၊ စနဈကနြစှာ ဆောငျရှကျပေးမှု မရှိတော့တာတှေ၊ ပွညျ့စုံစှာ စီစဈ မှတျခကျြ မပွုတော့တာတှကေို တှရှေိ့ လာရပါတယျ။
မွစောရငျးဌာနအနနေဲ့ ပဲခူးဆားလို နရောတကာ ပါနရေတော့ တခွားအလုပျတှေ ပိလှနျးတဲ့ အခါ မွို့မွကေိစ်စတှကေို လှညျ့မကွညျ့နိုငျတာလဲ ပါပါတယျ။
စနဈတကြ မစိစဈတော့ဘဲ အလှယျတကူ ဆောငျရှကျ လိုကျတဲ့အခါ အားနညျးခကျြတှေ ရှိသှားပွီး အစိုးရ မွလှေတျမွလေပျ မဟုတျတဲ့ အခွားမွမြေား (ဥပမာ- သဈတော ကွိုးဝိုငျးမွေ၊မီးရထားမွေ၊ လမျးမွေ၊ ဆညျမွောငျးမွေ၊ စညျပငျသာယာပိုငျမွေ၊ အစိုးရ ဌာန/ပုဂ်ဂလိကသို့ ခထြား ပွီးမွေ) စတာတှကေို အစိုးရက ခထြားပေးနိုငျသညျ့ မွေ Land at the disposal by Government လို့ မှားယှငျး မှတျခကျြပွုခွငျး၊ ယငျးမွမြေားကို ဂရနျခထြားပေးရနျထောကျခံခွငျး၊ စတဲ့ လှဲမှားတဲ့ မှတျခကျြပွု ပွနျကွားမှုတှေ ဖွဈလာရပွီး အခွား မသကျဆိုငျသူတှအေတှကျ၊ ခထြား မပေးသငျ့တဲ့ အစိုးရဌာနပိုငျမွမြေား၊ အစိုးရ သီးသနျ့ထား တဲ့ မွမြေားပျေါမှာ ပုဂ်ဂလိကမြားကို ဂရနျထုတျပေးရနျအထိ ထောကျခံပေးခဲ့ခွငျးမြား ရှိသှားကွပါတယျ။
မွစောရငျး ဌာနရဲ့ မွရောဇဝငျကို လှဲမှားစှာ မှတျခကျြပွု ထောကျခံပေးခကျြအပျေါ မူတညျပွီး မခထြားသငျ့တဲ့ မွမြေား/ဂရနျခြ ထား မပေးနိုငျတဲ့မွမြေားကို မွငှေါးဂရနျ ထုတျပေးမိခဲ့လို့ ပွဿနာ ဖွဈပှါးရတဲ့ ကိစ်စရပျတှေ၊ အရှုပျအရှငျး ဖွဈရတာ တှေ အမြားကွီး ပျေါပေါကျလာပါတယျ။
မနေ့ တနကေ့ထိ မွစောရငျးနဲ့ အထှထှေအေုပျခြုပျရေးဦးစီးဌာနမှာ ဂရနျမွေ အရှုပျအရှငျးအတှကျ အရေးယူခဲ့ရ သူတှေ ရှိနဆေဲ ဖွဈပါတယျ။
မွစောရငျးဝနျထမျးတှကေို မွရောဇဝငျ မှတျတမျး မှားယှငျးထုတျပေးမှု အတှကျနဲ့ မွပေုံအမှား ထုတျပေးမှုအတှကျ အရေးယူခံရတဲ့ ဖွဈစဉျတှလေညျး နားမဆနျ့အောငျ ကွားဘူးကွမှာပါ။
G.A နဲ့ အခွားဌာနက ဆရာတှလေညျး ထိတာပါဘဲ၊ စဈကိုငျးတိုငျးက ဂရနျမှား ပေးမိတဲ့ ခရိုငျအုပျခြုပျရေးမှူးတို့၊ မျောလမွိုငျရဲတပျဖှဲ့မွေ အငှါးခတြဲ့ကိစ်စအတှကျ သကျဆိုငျရာ တိုငျးအဆငျ့ တာဝနျ ရှိသူတို့ စသညျဖွငျ့ မွကေိုငျသှားတာတှေ အမြားကွီးပါ။
မွဆေိုတာ ဒီဖကျခတျေမှာ တနျဘိုးမွငျ့ ပစ်စညျးတဈရပျ ဖွဈလာနတေော့ အကိုငျအတှယျမှားခဲ့ရငျ တဈခြိနျမှာ အရိုးတှနျတတျပါတယျ။
အဲဒါကွောငျ့မို့ဌာနက လူငယျ သှေး သဈတှအေတှကျရော ပွငျပက ဗဟုသုတအဖွဈ သိမှတျခငျြတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျမြားအတှကျပါ ဂရနျခထြားမှုနဲ့ ပတျသကျတဲ့ သိသငျ့တဲ့ အခကျြလေးတှေ၊ သမားစဉျ လုပျထုံး လုပျနညျးလေးတှကေို တငျပွ ပေးလိုကျပါတယျ။
ဂရနျအကွောငျး ပွောကွတဲ့အခါ မွို့မွဆေိုတာ ဘာလဲ၊
အစိုးရမှ စီမံခထြားနိုငျသော မွဆေိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို အစပွု ပွောရပါတယျ။
မွို့မွေ အဝနျးအဝိုငျးအတှငျး ကရြောကျပွီး အစိုးရမှ ခထြားနိုငျသောမွေ ဖွဈမှ သာလြှငျ ဂရနျပေးလို့ ရပါတယျ။
ဒါကွောငျ့မို့ မွို့မွနေဲ့ ပတျသကျတဲ့ တညျဆဲဥပဒေ ညှနျကွားခကျြ၊ လုပျထုံး လုပျနညျး လမျးညှနျခကျြအခြို့နဲ့ ဝေါဟာရ ရှငျးလငျးခကျြတှကေို အောကျပါအတိုငျး အကဉျြးခြုပျ ဖျေါပွလိုပါတယျ။
(က) အစိုးရစီမံခထြားပိုငျခှငျ့ ရှိသောမွေ ( LAND AT THE DISPOSAL OF GOVERNMENT)၊
အစိုးရမှစီမံခထြားပိုငျခှငျ့ရှိသောမွေ (Land atthe disposal of Government) ဆိုတာကတော့ မွို့မွမှော အသုံးမြားတဲ့ ဝေါဟာရတဈခုပါ။
Disposal Land လို့ ဖျေါကွပါတယျ။
အောကျမွနျမာပွညျ မွို့နှငျ့ ကြေးရှာမွမြေားအကျဥပဒေ ပုဒျမ (၂)၊ ပုဒျမ (၃)၊ ပုဒျမ (၄)တို့မှာ ဖျေါပွထားခကျြအရ မွို့မွေ ရှာမွအေဖွဈ သတျမှတျထားတဲ့ ဧရိယာအတှငျး ကရြောကျပွီး မညျသူ တဈဦးတဈယောကျကိုမြှ အစိုးရ အနဖွေငျ့ အပိုငျဖွဈစေ၊ အငှားဖွဈစေ ပေးအပျခထြားခွငျး၊ မွပေိုငျဆိုငျခှငျ့ (သို့) မွရှေငျ ဆိုငျရာဆိုငျခှငျ့ အတှကျ မညျသူ့ကိုမြှ ပေးအပျထားခွငျး မရှိသေးတဲ့ မွမြေား၊ လကျရှိ ဦးပိုငျပေါကျ ပိုငျဆိုငျထားခွငျး မရှိတဲ့ မွမြေား၊ မညျသူမြှ လကျဝယျထားရှိပိုငျခှငျ့ မရရှိသေးတဲ့ မွမြေားကို ချေါတာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ အစိုးရမှ ခထြားပိုငျခှငျ့ရှိတယျဆိုတဲ့ မွထေဲမှာ လူနထေိုငျရနျအတှကျလညျးကောငျး၊ စိုကျပြိုးရေးအတှကျ လညျးကောငျး၊ အသုံးပွုခှငျ့ ရရှိထားတဲ့၊ သုံးနတေဲ့ မွတှေေ မပါရပါဘူး။
ထို့အတူ ရုံး၊ စကျရုံ အလုပျရုံ၊ တပျရငျးတပျဖှဲ့၊ မီးရထား၊ သဈတော၊ ဆညျမွောငျး၊ လမျး တံတားစတဲ့ အစိုးရဌာနမြားမှ အသုံး ပွုရနျ သတျမှတျထားပွီးတဲ့ မွမြေားလညျး မပါဝငျပါဘူး။
ထို့အတူ သာသနာ၊ သုဿနျ၊ အငျးအိုငျ စတဲ့ သီးခွား သတျမှတျ ခထြားပေးပွီး မွမြေားလညျး မပါဝငျပါဘူး။ ယခငျက Disposal Land ဖွဈခဲ့လို့ မွငှေား ဂရနျ ထုတျပေးထားတဲ့ မွသေညျပငျ နိုငျငံတျောပိုငျ မွဖွေဈသျောလညျး အဆိုပါ ထုတျပေးထားတဲ့ မွငှေား ဂရနျ သကျတမျးကုနျဆုံးခွငျး မရှိသေးသမြှ အစိုးရမှ ခထြားပေးနိုငျမွအေဖွဈ ခထြားပေးလို့ မရနိုငျသေးပါဘူး။
ဂရနျသကျတမျးအရ သုံးစှဲခှငျ့ ကနျြရှိနသေေးတဲ့မွကေို (Land at the disposal of Government) အစိုးရမှ ခထြားနိုငျသောမွလေို့ မသတျမှတျနိုငျပါဘူး။
တဈဦးတဈယောကျကို ခပြေးပွီးဖွဈနတေဲ့ သကျ တမျးအတှငျး သကျတမျးမကုနျမခငျြး ယငျးမွကှေကျကို အခွားတဈယောကျသို့ ပွောငျးလဲခထြား၍မရပါဘူး။
ခထြားလိုရငျတော့ မူလအမှုတှဲကို ပွနျလညျ ဖကျြသိမျးပေးရပါမယျ။
သကျတနျးမကုနျသေးတဲ့မွကေို ခထြားမိရငျ Law of Contract ပဋိဉာဉျဥပဒကေို ဖေါကျဖကျြရာ ကပြါတယျ။
မွတေဈကှကျကို ဂရနျ ခထြားပေးနိုငျရနျမှာ အစိုးရမှ ခထြားပေးပိုငျခှငျ့ ရှိသောမွေ ဖွဈမှသာလြှငျ ခထြားပေးနှိုငျတာ ဖွဈတဲ့အတှကျ အစိုးရမှ ခထြားပေးပိုငျခှငျ့ ရှိသောမွေ ဟုတျ/မဟုတျအတှကျ မွယော မှတျတမျးထိနျးသိမျးကိုငျတှယျတဲ့ မွစောရငျးဌာနရဲ့ မှတျခကျြဟာ အလှနျ အရေးပါတယျဆိုတာ သတိပွု ရပါမယျ။
အစိုးရမှ ခထြားပေးပိုငျခှငျ့ရှိသောမွေ မဟုတျရငျ မဟုတျကွောငျးကို မွစောရငျးရဲ့ ပွနျကွားခကျြ မှာ တိတိကကြ ဖျေါပွရနျ လိုပါတယျ။
( ခ ) မွို့မွနေထေိုငျပိုငျဆိုငျခှငျ့( Right of Land)မွို့မြားအတှငျးမှာ ရှိတဲ့မွတှေကေို အစိုးရက ခထြားသတျမှတျပေးတဲ့ မွပေိုငျဆိုငျခှငျ့နဲ့ ပတျသကျလို့ ၁၈၉၈ခုနှဈ အောကျမွနျမာပွညျ မွို့နှငျ့ ကြေးရှာ မွမြေား အကျဥပဒေ အခနျး-၂၊ ပုဒျမ-၇ နှငျ့ ၈ တို့မှာ အောကျပါအတိုငျးဖျေါပွထားပါတယျ။
အဲဒီအခကျြမြားနှငျ့ ညီညှတျမှသာ မွပေျေါ နထေိုငျ ပိုငျဆိုငျခှငျ့ရှိပါတယျ။
ပုဒျမ ရ ။ အောကျပါ မွပေိုငျဆိုငျခှငျ့ အခှငျ့အရေးမြားမှအပ အခွားမညျသညျ့ ဆိုငျရာဆိုငျခှငျ့ကိုမြှ မွို့နှငျ့ ကြေးရှာမွမြေားတှငျ မရှိစရေ။
(ဃ) အထကျ ပုဒျမ ရ၊ ပုဒျမခှဲ (က)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ တို့ပါ အခှငျ့အရေးကို မူလပိုငျဆိုငျသူထံမှ တရားဥပဒနှေငျ့အညီ လှဲပွောငျးရယူခံစားခှငျ့၊
ပုဒျမ ၈ ။ စာရငျးဝငျမွို့မြား (Scheduled Town)နှငျ့ အစိုးရမှ အမိနျ့ထုတျပွနျ ကငျးလှတျခှငျ့ ပေးထား သော မွမြေားမှအပ အောကျပါအခကျြမြားနှငျ့ ညီညှတျသူ မညျသူမဆို (Landholder’s right) မွရှေငျ ဆိုငျရာ အခှငျ့အရေးကို ရရှိစရေမညျ။
(က) မွို့နှငျ့ကြေးရှာမွမြေား ပွဌာနျးအတညျမဖွဈမီ လှနျခဲ့သော ၁၂ နှဈမှ ၁၈၉၉ ခုနှဈ၊ စကျတငျ ဘာလ၉ ရကျနထေိ့ မွကေို တဆကျတညျး ပိုငျဆိုငျ လကျရှိထားလာသူ၊
(ခ) သို့မဟုတျ ၁၈၉၉ ခုနှဈ စကျတငျဘာလ-၉ ရကျနေ့ မတိုငျမီ အခြို့သောကာလနှငျ့ ယငျးနေ့ နောကျပိုငျး လကျရှိဖွဈနသေောကာလ ၂ ရပျပေါငျး ၁၂ နှဈကာလပွညျ့အောငျ မွကေို လကျရှိ ထားပိုငျဆိုငျလာသောသူ၊
(ဂ) သို့မဟုတျ ၁၈၉၉ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ-၉ ရကျနမှေ့စ၍ နောကျပိုငျး ၁၂ နှဈကာလတိုငျ တဆကျတညျး မွကေို ပိုငျဆိုငျလကျရှိထားလာပွီး ယငျးကာလမြား၌ ၄ငျးမွနှေငျ့သကျဆိုငျသညျ့ အရပျရပျမွခှေနျတျောမြား၊ အစိုးရသို့ ပေးသှငျးရမညျ့ အခှနျအခမြား public demands ကို ထမျး ဆောငျလာသူ၊ မညျသူမဆို မွပေိုငျအခှငျ့အရေး ရရှိစရေမညျ။
ပုဒျမ ၉ ။ စဈတှေ၊ ပုသိမျနှငျ့ ပွညျမွို့မြားအတှကျ
(ခ) ပုသိမျမွို့တှငျ၁၈၇၆ ဇနျနဝါရီလ ၁ ရကျမှ စ၍ ယခုအကျဥပဒေ အတညျဖွဈသညျ့ ၁၈၉၉ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ-၉ ရကျနထေိ့ အဆကျမပွတျ လကျရှိ ဖွဈနပေါက၊
(ဂ) ပွညျမွို့တှငျ ၁၈၇၀ ဇနျနဝါရီလ ၁ ရကျမှ အစပွု၍ ယခုအကျဥပဒေ အတညျဖွဈသညျ့ ၁၈၉၉ ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ-၉ ရကျနထေျိ့ အဆကျမပွတျ လကျရှိ ဖွဈနပေါက၊
မညျသူမဆို မွပေိုငျအခှငျ့အရေး ရရှိစရေမညျ။ဆိုပွီး မွို့မွပေျေါမှာ ပိုငျဆိုငျရမဲ့ အခှငျ့အရေးတှေ သတျမှတျပေးခဲ့တာတှရေ့ပါသညျ။
ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ဖို့ ဂရုစိုက်ရမည့် အချက်လေးများ
စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ (69)
တရားနှင့် ဂါထာတော်များ (169)
အလှအပ နှင့် ကျန်းမာရေး (186)